Sawirro: Ciidamo ajnabi ah oo Xamar ka dagay!! | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Ciidamo ajnabi ah oo Xamar ka dagay!!
Sawirro: Ciidamo ajnabi ah oo Xamar ka dagay!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degtay diyaarad siday Saraakiil iyo Ciidamo ka socda dalka Ugandha.
Ciidamada kasoo dagay garoonka ayaa waxa ay bedelayaan kuwo horay u joogay Muqdisho oo dib ugu laabtay dalkooda.
Ciidamadan cusub oo qayb ka noqonaya AMISOM ayaa waxay bedeli doonaan ciidammo ka howlgalayay gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo uu taliye u ahaa, Col. Silvio Aguma, isla markaana ah ku simaha taliyaha ciidanka lugta ee Uganda, iyadoo ciidamadan Muqdisho soo gaarayna uu taliye u yahay Col. Bob Ogik.
Dowlada Uganda ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan ciidamada ugu badan ee hawl-galka AMISOM, waxaana Muqdisho la keenay sannadkii 2007-dii, iyagoo tan iyo xilligaas ka howlgalayay Somalia.